Xeradii Imaaraadka ka baxeen oo shirkad ajnabi ah lagu wareejiyay – Warfaafiye:
Qoraal ku taariikhaysan 26/4/2018 oo ka soo baxay Taliska ciidamada qaranka Soomaaliya (SNA) ayaa waxaa lagu xusey in tababarka iyo maamulka xerada General Gordon oo ku taal magalaada Muqdisho lagu wareejiyey shirkad gaar ah ee laga leeyahay dalka dibadiisa.
Xaqiiqda qoraalkaan oo xaqiijiyay saraakiil ka tirsan hay’adaha amniga dowlada Federaalka ayaa ku socda shirkada la siiyey qabdaraaskaan iyadoo ogeysiin la siiyey Wasaarada difaaca, Xafiiska Ra’isal wasaraha iyo xafiiska Madaxweynaha Soomaaliya iyadoo uu ku saxiixan yahay taliye ku xigeenka SNA Gen. Cabdulahi Cali Caanood.
Shirkadaan oo la yiraahdo Red Four Security Group for Somalia (SRG) oo fadhigeedu yahay magalaada London ayaa lagu sheegey qoraalkaan in laga aqbalay codisgoodii ahaa maamulka iyo kor u qaadista tayada ciidamada SNA ee ku sugan xeradaan.
SRG ayaa kamid aheyd shirkado uga shaqeysan jirey ilaalilnta Marakiibta xiligii burcad badeedka weerarada ka gaysan jirtey xeebaha dalka Soomaaliya ku ka muuqata bogga ay ku leedahay Internetka. Halkan ka eeg
Wareejinta xerada Gordon ayaa Wasaarada Gaashaandhiga qiil uga dhigtey kadib markii ay soo korortey khatarta Al shabaab ee ku soo wajahan dalka in taliska ciidanka go’aansadey in taakuleynta, maamulista iyo tababarka ciidankaan lagu wareejiyo shirkadaan.
“SNA ayaa ka fileysa shirkadan u hogaansanto dhamaan shuruucda dalka u dagsan iyadoo ciidamada qaranka u fududeynayaan dokumentiga u baahan yahay fulinta qandaraaskaan.” Sidaas waxa lagu sheegey qoraalkii shirkadaan loogu ogolaadey maamulka xeradaan.
Taliska ciidanka qaranka ayaa sheegey in ilaalinta amniga shaqalaha shirkadaan mas’uuliyad ka saaran tahay SNA.
Xerada Gordon ee ku taal magalada Muqdisho ayaa waxa maamuli jirey, mushahar-na siin jirey ciidamada ku sugan dowlada Imaaraadka balse ka baxdey markii uu xumaadey xiriirka u dhexeeya Villa Somalia.
Ciidamada SNA ayaa horey Taliska AMISOMu u sheegey in tayadooda maamul aad u hoseeyso islamarkaana awoodi karin iney la wareegaan amniga dalka.
Xerada Gordon ayaa horey ciidamadii ku Sugnaa suuqa uga iibsadeen 600 qor kadib markii ay ka baxeen tababarayaashii u dhashey dalka Imaraadka Carabta.
Shirkada (SRG) laga leeyahay dalka Ingriiska oo faa’ido doon ah ayaa la filayaa kharashka ay ku maamuleyso ciidamada ku jira xeradaan ay ka raadin doonta dalalka ay ugu horeyso dalka Qadar kasoo dagaal diblomaasiyeed kula jira Imaraadka Carabta.